သ​ရ​ဝဏ်(​ပြည်)(21 February 16) ﻿
​မြန်​မာ.​နိုင်​ငံ​ရေး​လော​က​မှ​လူ​အ​ပေါင်း​သည် ​ပုဒ်​မ ၅၉(​စ) ​နှင်. ​ပုဒ်​မ ၄၃၆ ​စ​သည်​တို.​တွင်​မဲ​နေ​သော်​လည်း ​ပုဒ်​မ ၃၄၂ ​၏​
အား​နည်း​ချက်​များ​ကို ​ပြော​သူ​မ​ရှိ​သ​လောက် ​မေ.​လျော.​နေ​ကြ​သည် ။
​ထို​မုဒ်​မ ၃၄၂ ​တွင်​လည်း ​မ​ရှုပ်​မ​ရှင်း​ဖြစ်​နေ​သော ၊​တိ​ကျ​ရေ​ရာ​မှု​မ​ရှိ​သော ​ယေ​ဘု​ယျ​ဆန်​လွန်း​ သော​ပြ​ဌာန်း​
ချက်​များ​ပါ​ဝင်​နေ​သည်​ကို​ထောက်​ပြ​လို​ပါ​သည် ။ ၂၀၀၈ ​တွင်​အ​တည်​ပြု​လိုက်​သော ​ပြည်​ထောင်​စု​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တော်​ဖွဲ.​စည်း​ပုံ​အ​ခြေ​ခံ​ဥ​ပ​ဒေ ​အ​ခန်း (၇) ​သည် ​တပ်​မ​တော်​ဟူ​
ထို​အ​ခန်း(၇) ​ပုဒ်​မ ၃၄၂ ​တွင် ​နိုင်​ငံ​တော်​သ​မ္မ​တ​သည် ​အ​မျိုး​သား​ကာ​ကွယ်​ရေး​နှင်.​လုံ​ခြုံ​ရေး​ကောင်​စီ​၏ ​အ​ဆို​ပြု​ထောက်​ခံ​
ချက်​ဖြင်. ​တပ်​မ​တော်​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီ​ချုပ်​ကို​ခန်.​အပ်​တာ​ဝန်​ပေး​ရ​မည် ​ဟု​ပါ​ဝင်​ပါ​သည် ။
​ဆက်​ဖတ်​ကြည်.​သော​အ​ခါ ​တိုင်း​ပြည်​ကာ​ကွယ်​ရေး​နှင်. ​လွှတ်​တော်​နိုင်​ငံ​ရေး​အ​တွက်​အ​ရေး​အ​ကြီ​ဆုံး​ဖြစ်​သည်. ​
တပ်​မ​တော်​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီ​ချုပ်​ဖြစ်​သင်.​ဖြစ်​ထိုက်​သည်. ​အ​ရည်​အ​ချင်း​သတ်​ချက် ​ကို​လုံး၀​မ​တွေ.​ရှိ​ရ​သည်​မှာ​
အ​လွန်​ထူး​ဆန်း​၍ ​ဖွဲ.​စည်း​ပုံ​အ​ခြေ​ခံ​ ဥ​ပ​ဒေ​၏​လစ်​ဟာ​မှု​ကြီး (​သို.​မ​ဟုတ် )​တ​မင်​သက်​သက် ​အ​သာ​စီး​ယူ​ထား​
​နိုင်​ငံ​အ​တွက်​အ​ရေး​အ​ပါ​ဆုံး​ပု​ဂ္ဂိုလ်​ဖြစ်​သော ​သ​မ္မ​တ​ရာ​ထူး​ရွေး​ချယ်​ရာ​တွင် ​ပုဒ်​မ ၅၉ (​က) ​မှ (​ဆ) ​အ​ထိ ​အ​ချက် ​ခု​နစ်​ချက် ​အ​သေး​စိတ်​ရေ​ပက်​မ​ဝင်​အောင်​ပြ​ဌာန်း​ထား​သော်​လည်း ​တပ်​မ​တော်​ကာ​ကွယ်​ရေး​ ဦး​စီး​ချုပ်​ဖြစ်​ထိုက်​သည်. ​
လူ​တစ်​ယောက်​၏ ​အ​ရည်​အ​ချင်း​သတ်​မှတ်​ချက်​များ​ကို ​စာ​ရွက်​ပေါ ်​တွင်​တိ​တိ​ကျ​ကျ​ဘာ​မှ​ချ​ရေး
​ထား​ခြင်း​မ​ရှိ​ပဲ ​ကာ​လုံ ​အ​ဖွဲ.​ကို​သာ​လွှဲ​ချ​ထား​လေ​သည် ။​
ထို​ကာ​ကွယ်​ရေး​နှင်.​လုံ​ခြုံ​ရေး​အ​ဖွဲ.​တွင်​အ​ဖွဲ.​ဝင် (၁၁)​ဦး​ရှိ​ရာ​တွင်​လည်း ​စစ်​ဘက်​မှ​လက်​ရှိ ​တပ်​မ​တော်​ကာ​ကွယ်​ရေး​
ဦး​စီး​ချုပ်၊​ဒု​တိ​ယ​တပ်​မ​တော်​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ် ၊​တပ်​မ​တော်​မှ​တင်​သော ​ဒု​သ​မ္မ​တစ်​ယောက် ၊ ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဝန်​ကြီး ၊ ​
နယ်​စပ်​ရေး​ရာ​ဝန်​ကြီး ၊ ​ပြည်​ထဲ​ရေး​ဝန်​ကြီး ​ဟူ​သော ​တပ်​မ​တော်​မှ​လူ ၆​ယောက်​က​အ​ဓိ​က​ထား​ဆုံး​ဖြတ်​မည်​ဖြစ်​သ​ဖြင်. ​
တပ်​မ​တော်​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ကို​တပ်​မ​တော်​က​ခန်.​ခွင်.​ရှိ​သ​လို​သာ​ဖြစ်​နေ​ပါ​သည် ။ ​သ​မ္မ​တ​က​ခန်.​ခွင်.​ရှိ​သည်​ဆို​ခြင်း​မှာ​ဟန်​ပြ​သာ​ဖြစ်​နေ​သည် ။ ​
ကာ​လုံ​အ​ဖွဲ.​တွင် ​လူ ၁၁ ​ယောက်​သာ​ရှိ​သည်.​အ​နက် ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ပါ​ပြီး​ပါ​လျက် ​ဒု​တိ​ယ​ကာ​ကွယ်​ရေး
​ဦး​စီး​ချုပ်​ကို​ထည်​ထား​ခြင်း​မှာ​လည်း ​လူ​ထပ်​နေ​သ​လို​ရှိ​ကာ ​တ​မင်​စစ်​ဘက်​မှ​လူ​များ​ကို ​လူ​ဦး​ရေ​အ​သာ​ရ​အောင်​လုပ်​ထား​
သ​လို​ဖြစ်​နေ​ပါ​သည် ။ -------------------------------------------------------
​အ​ဆိုး​ဆုံး​အ​ချက်​မှာ ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​အ​ဖြစ်​ခန်.​အပ်​ခံ​ရ​မည်.​သူ​၏ --
(​င) ​အ​ခြား​အ​ရည်​အ​ချင်း​ကန်.​သတ်​ချက် ​များ
(​ဆ) ​ရာ​ထူး​မှ​ဆက်​လက်​မ​ထမ်း​ဆောင်​သင်.​သော ​စွပ်​စွဲ​ပြစ်​တင်​မှု ​များ ​ကို
​ဖွဲ.​စည်း​ပုံ​အ​ခြေ​ခံ​ဥ​ပ​ဒေ​တွင်​လုံး၀​ထည်.​သွင်း​ပြ​ဌာန်း​ထား​ခြင်း​မ​ရှိ​ချေ ။ ​
ထို​အ​ခါ ​တပ်​မ​တော်​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ကို ​မည်​သည်.​စံ​သတ်​မှတ်​ချက်​များ​ဖြင်.​ရွေး​မည် (​ဥ​ပ​မာ ​ဗိုလ်​သင်​တန်း​အ​ပါတ်​စဉ်​ရှေ.​နောက်​စီ​နီ​ယာ​အ​ရ​ရွေး​မည်​လား ၊ ​ဗိုလ်​ချုပ်​မှူး​ကြီး၊​ဒု​တိ​ယ​ဗိုလ်​ချုပ်​မှူး​ကြီး​ဖြစ်​မှ​ပဲ​ရွေး​မည်​လော ၊ ​သို.​မ​ဟုတ် ​အ​ထက်​လူ​ကြီး​ဟောင်း​များ​၏​အ​ကြံ​ဉာဏ်​ထောက်​ခံ​ချက်​ဖြင်.​သာ​ရွေး​မည်​လား ၊ ​သ​မ္မ​တ​က ​ခန်.​ထား​ခွင်.​ရှိ​သည်​ဟု​ပြော​ထား​ရာ ​သ​မ္မ​တ​တ​ကယ်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​သူ​ကို ​ရွေး​ချယ်​ခွင်.​ရ​မည်​လား )​ဟူ​၍​မေး​စ​ရာ​ကိ​စ္စ​တွေ​ရှိ​ပေ​သည် ။​ထို.​အ​ပြင် ​သ​မ္မ​တ​သည် ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ကို​ခန်.​အပ်​ရ​မည်​ဟု ​ဆို​ရာ​၌
- ​သ​မ္မ​တ​တစ်​ခါ​တက်​တိုင်း ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​ချုပ်​တစ်​ကြိမ်​ခန်.​အပ်​ရ​မည်​လား
- ​အ​ငြိမ်း​စား​တပ်​မ​တော်​အ​ရာ​ရှိ​ဟောင်း​တစ်​ဦး​ကို ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​လောင်း​အ​ဖြစ် ​သ​မ္မ​တ​မှ ​အ​မည်​တင်​သွင်း​
- ​ကာ​လုံ​အ​ဖွဲ.​က​လက်​ရှိ​ရွေး​ချယ်​ထား​သော ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ကို ​နောက်​တက်​လာ​သော ​ကာ​လုံ​အ​ဖွဲ.​က ​အ​သစ်​ပြန်​ရွေး​ချယ်​ပေး​နိုင်​ခွင်.​ရှိ​မ​ရှိ
​စ​သည်.​အ​ချက်​များ​သည် ​ဖွဲ.​စည်း​ပုံ​အ​ခြ​ခံ​ဥ​ပ​ဒေ​တွင်​လည်း​မ​ပါ ၊ ​တပ်​မ​တော်​က​တ​ရား​ဝင်​ထုတ်​ပြန်​ကြေ​ငြာ​မှု​လည်း​မ​ရှိ​
သော ​မ​ရှုပ်​မ​ရှင်း​ကိ​စ္စ​များ​ဖြစ်​သည် ။
​ထို​ကိ​စ္စ​များ​ကို​လွှတ်​တော်​တွင်​တ​ရား​ဝင်​မေး​မြန်း​ကာ ​ဥ​ပ​ဒေ​ခိုင်​မာ​အောင်​ပြု​သင်.​ပါ​သည် ။​
ထို​သို.​မ​ဟုတ်​ပါ​က ​သ​မ္မ​တ​များ ၊​လွှတ်​တော်​ကိုယ်​စား​လှယ်​များ ၊ ​ပြည်​ထောင်​စု​တ​ရား​သူ​ကြီး​ချုပ် ၊ ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ.​န
ေ​ချုပ် ၊​ပြည်​ထောင်​စု​စာ​ရင်း​စစ်​ချုပ်​ရာ​ထူး​တို.​အ​တွက် ​စစ်​စစ်​ပေါက်​ပေါက်​စဉ်း​စား​သ​လောက် ​နိုင်​ငံ​၏ ​အာ​ဏာ ​
ဗ​ဟို​ချက်​ဖြစ်​နေ​သော ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ရာ​ထူး​အ​ရည်​အ​ချင်း​သတ်​မှတ်​ချက်​မှာ ​ပျောက်​ကွယ်​လစ်​ဟာ​နေ​ပါ​သည် ။
ပြီး​ခဲ.​သော​ရက်​ပိုင်း​က ​တပ်​မ​တော်​လေး​လ​ပါတ်​အ​စည်း​အ​ဝေး​အ​ပြီး ​ဗိုလ်​ချုပ်​မှူး​ကြီး​နှင်.​ဒု​တိ​ယ​ဗိုလ်​ချုပ်​မှူး​ကြီး​
နေ​ရာ​များ​အ​တွက် ​အ​ငြိမ်း​စား​ယူ​ရ​မည်.​သက်​တမ်း​မှာ ၆၅ ​နှစ်​အ​ထိ​တိုး​မြှင်.​လိုက်​ကြောင်း​သ​တင်း​များ​ထွက်​လာ​ပေ​သည် ။ ​
လက်​ရှိ​ကာ​ကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ဗိုလ်​ချုပ်​မှူး​ကြီး​ မင်း​အောင်​လှိုင်​၏​ အ​သက်​မှာ​လည်း ​မ​ကြာ​ခင် ၆၀ ​ပြည်.​
တော​မည်​ဖြစ်​သ​ဖြင်. ​သက်​ပြည်.​ပင်​စင်​ယူ​ကာ​နီး​မှ ​ထို​သို. ၅ ​နှစ်​ထပ်​တိုး​လိုက်​ခြင်း​ကို ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​က ​ဝေ​ဖန်​နေ​ကြ​သည် ။
​အ​မှန်​စင်​စစ် ​ရာ​ထူး​မှ​အ​ငြိမ်း​စား​ယူ​သည်.​သက်​တမ်း ၊ ​ရာ​ထူး​စ​တင်​ခန်.​ထား​နိုင်​သည်.​အ​ငယ်​ဆုံး​သက်​တမ်း ၊
​နှင်.​အ​ခြား​အ​ရည်​အ​ချင်း​သတ်​မှတ်​ချက်​များ​ကို ​ဖွဲ.​စည်း​ပုံ​အ​ခြေ​ခံ​ဥ​ပ​ဒေ ​တွင်​သာ​တ​ရား​ဝင်​ရေး​ဆွဲ​ပြ​ဌာန်း​ထား​သင်.​
ပေ​သည် ။ ​
သို​မ​ဟုတ် ​ပြည်​ထောင်​စု​လွှတ်​တော်​က​သာ​အ​တည်​ပြု​ပြ​ဌာန်း​ပေး​ရ​ပေ​လိမ်.​မည် ။ ၅၉ (​စ)​သည်​ပြင်​ဆင်​ရန် ​အ​လွန်​ခက်​အောင်​ပုဒ်​မ​မျာ​စွာ​ဖြင်. ​ချုပ်​နှောင််​ထား​သော်​လည်း ၊​ပုဒ်​မ ၃၄၂ ​မှာ ​ဘာ​
မှ​ရှင်း​အောင်​ရေး​မ​ထား​သ​ဖြင်. ​သက်​ဆိုင်​ရာ​ပု​ဂ္ဂိုလ်​များ​က ​ဘာ​ပဲ​ထပ်​ထည်.​ချင်​သည်​ဖြစ်​စေ ​ငှက်​ပျော​သီး​အ​ခွံ​နွှာ​စား​
သ​လို​လွယ်​ကူ​လွန်း​နေ​သည်. ​ဟာ​ကွက်​ကြီး​ဖြစ်​ပေါ ်​နေ​ပါ​ကြောင်း ။